As of Tue, 02 Jun, 2020 03:45
जापान सरकारले खाद्य सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई रु ३५ करोड ६० लाख अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सरकारले बर्सेनि अनुदानका नाममा अर्बौं लगानी गरिरहे पनि आफूहरूले नपाएको दुखेसो केरा उत्पादक कृषकहरूले गरेका छन् । कृषकहरूले अनुदानको साटो सरकारले नीति नियम बनाउने र समस्या परेका बेला साथ दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका विभिन्न १० जिल्लाका अगुवा कृषक-उत्पादकहरू केरा खेतीमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अहिले राजधानी आइपुगेका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनको ४ महिनामै थप ५४ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च हुन गर्न नसकेर चौतर्फी दबाब खेपिरहेको सरकारलाई बजेटभन्दा बाहिरबाटै ठूलो रकमको माग आएपछि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
नेपालभर रहेका विभिन्न उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै कर बुझाएबापत दाङमा रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित भएको छ । सातौं कर सप्ताहका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा उद्योगलाई सम्मान गरिएको थियो । सरकारले सात वर्ष अघिदेखि राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ ।
नेपालले निजी लगानीलाई पाँच क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरे आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने विश्व बैकको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले जनाएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमार्फत् ८० करोड अमेरिकी डलर (करिब ९० अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने भन्दै आईएफसीले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिजन्य उपजका व्यापारका अतिरिक्त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेको पनि बताएको छ ।
विदेशी लगानी घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण
डा. प्रकाशशरण महत, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्न उनै डा. महतको संयोजकत्वमा आर्थिक मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिले कांग्रेसले लिँदै आएको आर्थिक नीतिका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्दै अर्थनीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन विभिन्न चरणमा छलफलसमेत चलाएको छ ।
सातौं राष्ट्रिय कर दिवस : राणा पाँचौंपटक सर्वोत्कृष्ट करदाता
व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर जबरा पाँचौपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बनेका छन् । सातौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले जबरालाई धेरै आयकर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा शनिबार सम्मान गरेको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका जवरा पाँचौंपटक यो विधामा सम्मानित भएका हुन् ।
मन्थली नगरपालिकाको आयव्यय सार्वजनिक
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले २३ करोड ९८ लाख ५३ हजार ५ सय ८३ रूपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
हस्तकला व्यापार मेलामा मित्र राष्ट्रका राजदूतहरु
१६औं हस्तकला व्यापार मेलाको आज दोश्रो दिन भृकुटिमण्डपमा अवलोकनकर्ताहरुको अपार भीड रहेको थियो । मेला अवलोकन गर्न नेपालको लागि राजदूतविभिन्न देशका राजदुतहरु आएका थिए ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा कूल रु एक अर्ब ५९ करोड ११ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले रु एक अर्ब ४८ करोड ६५ लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
झिनियाको अत्यधिक व्यापार
गुल्मीको वामीटक्सार बजारमा उत्पादित झिनिया रोटीको माग चाडपर्वका बेला अत्यधिक हुन थालेको छ । विशेष गरी चाडवाडको समयमा अत्याधिक माग हुने यो रोटी विवाह ब्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रममा पनि विशेष प्रयोग हुने गरेको छ ।
आम्दानी १६ लाख, खर्च ३४ लाख
देशकै नमूना तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्रको रूपमा रहेको रुकुम पश्चिम चाँफास्थित समशितोष्ण तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्रले बीउ बिक्रीबाट खर्चभन्दा कम आम्दानी गर्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बीउ उत्पादनका लागि सरकारबाट खर्च हुने बजेटको आधा मात्र राजस्व उठ्ने गरेको हो ।
नेपालमा पहिलो पटक अलैंची प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै नीति बन्ने भएको छ । नीति लागू भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक माग रहेको अलैंचीको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सघाउ पुग्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सरकारले पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकसँग १८ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरेको छ । बुधबार भएको समारोहमा अर्थसचिव डा. राजन खनाल र नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
ललितपुर बन्यो मुलुककै पहिलो ‘वल्र्र्ड क्राफ्ट सिटी’
ललितपुर महानगरपालिकालार्ई नेपालकै पहिलो विश्व हस्तकला सहर (वल्र्ड क्राफ्ट सिटी) को घोषणा गरिएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बुधबारबाट सुरु भएको १६ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १४ औं प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनीको उद्घाटनका क्रममा विश्व कला परिषद्ले ललितपुरलार्ई बल्र्ड क्राफ्ट सिटी घोषणा गर्दै महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनलार्ई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो ।